Ny tombontsoa marobe amin'ny persimon kaki | Nutri Diet
Ny tombontsoa marobe amin'ny persimmon persimon
PaÃ¼ Heidemeyer | | aretina, sakafo
Mahita karazana persimmon maromaro isika anio, na izany aza, ny iray izay mahakasika antsika ankehitriny dia ny khaki Persimon. Io no anarana ahafantarana ny persimmon, izay manana pulp henjana sy mena, ireo voankazo ireo dia maniry ary antokom-pinoana niaviany tao amin'ny Ribera del Xúquer.
Ny persimmon na kaki dia karazan-kazo voankazo manana ny anarany ara-tsiansa tifitra khaki. Izy io dia namboly hatramin'ny taonjato faha-XNUMX tany Chine sy Japon, na izany aza, teo antenatenan'ny taonjato faha-XNUMX no nipoitra tampoka ity karazana Rojo Brillante ity tany amin'ny faritr'i Valencia ao amin'ny Ribera del Xúquer.
Mampiavaka ny karazana persimmon isan-karazany Ny pulp ihany no mila jerentsika, raha malefaka ny pulp ary malemy kokoa ilay izy khaki Classic, voankazo iray izay matetika no hanina amin'ny sotrokely, raha persimmon kosa ny karazany mafy Persimon, izay azo hokapaina sy voahopy toy ny paoma ary mitovy tsiro amin'ny Klasika.
Izy ireo dia voankazo mitovy ihany, ny mampiavaka azy ireo dia ny mason'ny fahamatorana. Ny kilasika diajinjaina matotra, raha el Persimmonón dia nangonina semi matotra. Ity farany dia namaky dingana iray hisorohana ny fahazaran-dratsy satria io voankazo io alohan'ny hahatongavany amin'ny fahamatorana dia tena mampangirifiry ary noho izany dia tsy mety amin'ny fihinanana.
Persimmon Persimon miseho amin'ny fararano, voankazo matsiro manome tombony lehibe amin'ny fahasalamana. Manana loko volomboasary izy, mahafinaritra ny fofony ary mitovy habe amin'ny voatabia izy. Ampirisihina ho an'ny olona manana tosidra na kolesterola avo.
1 Persimón persimmon fananana
2 Mahatonga anao matavy ve ny persimmon persimmon?
3 Fambolena persimmon persimmon
4 Kaloria persimmon persimmon
5 Ahoana ny fahamasinana persimmon
6 Ahoana ny fihinanana persimmon
Persimón persimmon fananana
Izy io dia sakafo manankarena vitamina, mineraly ary fibre. Tena ilaina izany, raha ny piramidan'ny sakafo naroso mandany voankazo 3 isan'andro ary legioma na anana 5 farafahakeliny isan'andro. Ny Persimmon dia voankazo ary tena ilaina tokoa ny fanjifany, na dia toy ny amin'ny tranga rehetra aza dia tsy tokony hanararaotra sakafo isika, na dia mahasoa sy mahasoa inona ho antsika aza izany.
Ny Persimmon dia tsy mitovy amin'ny voankazo hafa satria tonga lafatra amin'ny fitsaboana olana ara-pahasalamana sasany, noho ny vitamina, mineraly ary fibre ao anatiny.
Fitohanana sy fivalanana: mety avokoa na hitsaboana fitohanana tsindraindray na hampiatoana ny fivalanana, izany dia vokatry ny pectin, ny mucilage ary ny tannins. Ny persimmon masaka dia asaina hitsaboana fitohanana, ary persimmon mafy hikarakarana ny fivalananana noho ny fivoarany.
Fiakaran'ny tosidra: manankarena potasioma ary misy sôdiôma ambany noho izany antony izany, tena soso-kevitra ho an'ireo izay tsy mila mihinana sira be dia be.
Kolesterola avo: Ny voankazo amin'ny ankapobeny dia manampy amin'ny fihazonana ny tahan'ny kolesterola tsara, ary ny persimmon manokana koa dia miady amin'ny fampidinana ny kolesterola ratsy ary mampitombo ny kolesterola tsara.
Persimmon manan-karena vitamina A, C sy B1 ary B2 izy io. Ireo izay tsy mahazaka tsara ny voasarimakirana na dipoavatra dia afaka manampy persimmons bebe kokoa amin'ny sakafony mba hitazomana ireo vitamina ireo ho betsaka.
Mahatonga anao matavy ve ny persimmon persimmon?
Persimmon dia miavaka amin'ny alàlan'ny maha antioksida, manakana antsika tsy hijaly amin'ny aretina toy ny homamiadana, ho fanampin'izay, hikarakara ny fahanterana mialoha ny sela ary ny olan'ny hoditra.
Betsaka ny olona mieritreritra fa ny voankazo dia manana siramamy manokana, fructose dia mety hahatonga antsika ho matavy ary toy izany koa no mety hitranga amin'ny persimmon. Na izany aza, mamy loatra sy manankarena ny persimmon ka tsy matavy.
Na izany aza, sakafo mahasalama izy io, mikarakara ny sakafontsika ary manana kaloria 70 monja isaky ny voankazo 100 grama izy io.
Raha ampitahaina amin'ny voankazo hafa holazainay fa tsy mampatavy antsika izanyAnkoatr'izay, manampy antsika hihena izy io satria noho ny hatsarany, ny endriny ary ny tsirony mahatonga antsika tsy hisakafo tsakitsaky anelanelan'ny sakafo ary mihinana vokatra tsy mahasalama.
Fambolena persimmon persimmon
Ny hazo persimmon dia mivoatra miadana rehefa tanora, mety hahatratra hatramin'ny hahavony 10 na 12 metatra. Ny voniny dia mipoitra aoriana noho ny hazo voankazo hafa izay mahatonga azy mahatohitra kokoa ny fanala. Tokony hohamafisinay fa ny voankazo dia tsy tena voankazo, na dia heverintsika ho toy izany aza, dia nangonina tamin'ny volana Oktobra, noho izany antony izany no ilazantsika fa voankazo fararano io.
Amin'ny tapaky ny lohataona, raha tsara ny toetr'andro, manomboka mipoitra ny voninkazo persimmon voalohany.
Marefo ny hazon'ny vatan-kazo, lafiny iray izay mety hanjary olana satria ity hazo ity dia afaka mamokatra voankazo mihoampampana ary raha osa ny rantsana dia mety tapaka izy ireo noho ny lanjany. Raha tapaka ny rantsana dia azonao atao ny mamoaka holatra sy bibikely. Tsy mitaky mihitsy ny fambolen-kazo ary mifanaraka amin'ny toetrandro Mediteraneana. Noho izany, raha mieritreritra ny hamboly hazo manome voankazo ianao dia afaka misafidy persimmon fa tsy handiso fanantenana anao.
Kaloria persimmon persimmon
Ny persimmons dia tena mahavelona, omeo gliosida amin'ny endrika glucose sy fructose, ambany tavy sy proteinina izy io.
Misy vitamina A, C ary mineraly toy ny kalsioma, vy, phosforus, potasioma, sodium ary magnesium. Safidy tsara ny handany amin'ny misasakalina mba hamonoana ny bibikely.
Ahitana karotena sy cryptoxanthin lasa izay vitamina A sy C ao amin'ny tsinay kely. Ny fibra soluble anananao dia izany mucilage sy pectin, ankafizo ny fitaterana ny tsinay.
Miadia amin'ny aretina mihena Noho ny atin'ny antioksida avo lenta dia atolotra amin'ny tranga misy fivalanana, colitis. Maniry ny fahitana tsara sy ny fitomboana ary ny fivoaran'ny taolantsika izy io.
Sanda mahavelona isaky ny 100 grama:
Kaloria: 65,6 kcal
Karbohidraty: 16 g
Tiberia sakafo: 1,6 g
Sôkômbia: 190 mg
Manezioma: 9,5 mh
Pro-Vitamina A: 158,3 µg
Asidra folika: 7 µg
Ahoana ny fahamasinana persimmon
Persimón persimmon dia persimmon fotsiny izay efa nojinjaina talohan'ny fotoany, alohan'ny hahamasaka azy. Mahatonga ny pulpany ho henjana sy azo esorina ary tapaho toy ny voatabia na paoma. Alohan'ny hamoahana ilay persimmon dia tsy maintsy jerena fa tena astringent izy io ary tsy mety amin'ny fanjifana, noho izany dia tsy maintsy mandalo dingana iray hahamendrika azy.
Na dia mety mieritreritra aza isika fa sarotra izany dia tsotra ihany. Araka ny fomban-drazana dia tratra izany fonosina am-taratasy ireo voankazo ary avelao amin'ny masoandro mba hahatratrarana ny éthilène ambony kokoa, ny akora izay misoroka ny fivoahana.
Ny lafiny tonga lafatra dia azo tanterahina amin'ny ara-barotra Efitra misy hafanana 20 of miaraka amin'ny atmosfera voafehy Izy io dia mirakitra ny fifangaroan'ny etanol 5.000 ppm, ary ny hamandoana 90%.
Raha te ho matotra ao an-trano isika, ny filamatra dia ny mamela azy ao anaty boaty misy voankazo hafa izay mamoaka etyneIzy, toy ny paoma, poara na akondro ihany koa.
Ahoana ny fihinanana persimmon
Ny Persimon dia voankazo matsiro, mamy beTsy manana bonne izy io ary manana lamina malama tena izy. Azo ampiasaina amin'ny slices ho salady na tsindrin-tsakafo. Azontsika atao ny mandray azy io toy ny paoma.
Matetika dia lanina ho voankazo vaovao. Miankina amin'ny karazany no ahitantsika ny Klasika, izay manome pulp mamy sy malefaka kokoa azontsika laniana amin'ny sotro. Raha ny kinova Persimón dia voahitsakitsaka ary nohanina toy ny voankazo hafa.
Ny fomba iray hafa handaniana azy io dia maina, mety ho ampahany amin'ny mofomamy, mofomamy na puddings. Azo atao jam na mofo persimmon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » aretina » Ny tombontsoa marobe amin'ny persimmon persimon
Ny zavatra tokana dia tsy haiko raha mila mihinana azy amin'ny hoditra ianao na tsy manana hoditra, ireo kakis. Misaotra betsaka, raha misy mamaly ahy.
Javier Varela dia hoy izy:
Miaraka amin'ny hoditra
Valio i javier varela
jesoa ayala peña dia hoy izy:
nohanina amin'ny zavatra rehetra sy ny hoditra izy, toy ny paoma ...
Mamaly an'i Jesosy ayala peña
Pilar Martin-lohelo dia hoy izy:
Matsiro amin'ny hoditra izy io ary voaravaka, notetehina manify ary tsara ny syrup kely
Valiny tamin'i Pilar Martin-loeches
Maria orellana dia hoy izy:
Tsy nahalala an'io voankazo io aho fa tiako ary niaraka tamin'ny fananana rehetra izay ananany bebe kokoa, notsoahako foana io fa hozahako amin'ny hoditra izany.
Valiny tamin'i Maria Orellana
Luisa dia hoy izy:
Rahoviana no fotoana hambolena persimona ao anaty vilany?
Valio i Luisa
Fitsaboana voajanahary ho an'ny tosidra ambany
Torohevitra fitiavam-bika salady amin'ny ririnina